नेइमारलाई अनुबन्ध गर्न रियल मड्रिडको यस्तो शर्त, पूरा गर्लान् त नेइमारले ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेइमारलाई अनुबन्ध गर्न रियल मड्रिडको यस्तो शर्त, पूरा गर्लान् त नेइमारले ?
युरोपियन फुटबलको ट्रान्सफर विण्डो खुलेसँगै केही ठूला नामहरु ट्रान्सफरको लागि चर्चामा आएका छन् । यीमध्येको सबैभन्दा ठूलो नामको रुपमा पिएसजीका ब्राजिलियन स्टार नेइमार देखिएका छन् । पछिल्लो समय उनी पिएसजीमा सन्तुष्ट नभएको खबर बाहिरिएको थियो । पिएसजीमा रहेर घरेलु उपाधि जिते पनि युरोपियन उपाधि भने उनले जित्न सकेका छैनन् ।
केही विश्लेषकले नेइमारले बार्सिलोना छाड्नु नै उको ठूलो भूल भएको टिप्पणी गरे । केहीले उनलाई अहिले पछुतो भएको पनि बताए । बार्सिलोनाले भने यो सिजन उनलाई पुनः ल्याउन सम्भावना छेन । बार्सिलोनाका अधिकारीले केही दिनअघि नेइमारको भविष्य बार्सिलोनामा सकिएको र उनी रियल मड्रिड गए हुने भनेका थिए । अहिले नेइमार पनि रियल जान इच्छुक भएको बताइएको छ ।
रियल मड्रिडले भने नेइमारलाई अनुबन्ध गर्नको लागि शर्त राखेको छ । नेइमारले यो शर्त पूरा गर्न सकेमा मात्र उनी रियल आउन पाउने रियलका अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो पेरेजले प्रस्ट पारेका छन् । पेरेजले नेइमार आफूले मात्र चाहेर रियल आउन नसक्ने बताए । यदि नेइमारले आफू रियलमा आउन चाहेको बारे पिएसजीका अधिकारीलाई प्रस्ट बताउने र पिएसजीले पनि नेइमारलाई पठाउन चाहेको खण्डमा मात्र उनी रियल आउन सक्ने पेरेजले प्रस्ट पारेका छन् । पिएसजीको चाहनाविपरित नेइमारले मात्र चाहेर सम्झौता तोडेर रियल आउन चाहेका उनी रियल आउन नसक्ने पेरेजले प्रस्ट पारेका छन् ।